KFO: Ajjeechaan Seeraan Alaa Qaama Mootummaatiin Fudhatamaa Jiru Hatattamaan Dhaabbachu Qaba – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooKFO: Ajjeechaan Seeraan Alaa Qaama Mootummaatiin Fudhatamaa Jiru Hatattamaan Dhaabbachu Qaba
Ajjeechaan Seeraan Alaa Qaama Mootummaatiin Fudhatamaa Jiru Hatattamaan Dhaabbachu Qaba
Ajjeechaa Dargaggoo Amanu’eel Wandimmuu Irratti Raawwatame Ilaalchiisee Ibsa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) irraa kenname
Eenyumtuu hojii seeraan alaa yakkaan gaafachiisu raawwatee bakka kamittu yoo qabame, qaama seeraatti dhiyaatee mirkana’uu akka qabu hubannoo keessa galee, garuu, dargaggoon Amanu’eel Wandimmuu Kabbadaa adeemsi kun utuu hin-raawwatamiin adabaabaay bakka jiraattooti magaalaa Dambii Doolloo, godina Qellem Wallaggaa walitti qabamanitti ajjeefamuunsa nu gaddisiiseera.
Taateen akkanaa xoofoo/waancaa guutee waan dhangala’eef ibsa kana baafne malee taarkaanfiin fakkaataan bakka adda addaatti qaama mootummaatiin fudhatamunsa erga jalqabe oolee buleera.
Godina Gujii aanaa Gooroo Doollaa keessatti mobaalii keetu wal gahii keessatti nutti iyye jedhamee humni mootummaa wal gahii sana geggeessa ture dargaggoo tokko fuula namoota wal gahii taa’an duratti ajjeeseera.
Godina Wallagga Bahaa magaala Naqamtee keessatti dargaggoota wal bira ta’anii taphataa jiranu humni mootummaa ol itti seenee ajjeesee meeshaa waraana bira ka’ee suura kaaseera.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asaabii haatii ijoollee afurii Amsaaluu Guddataa odoo maasii keessaa hojjettuu humna mootummaatiin ajjeefamtee ti.
Artisti Haacaaluun qaama/nama hanga yoonatti abalu jedhamee hin dubbatamneen ajjeefamee firootisaa magaalaa Amboo, godina Shawaa Lixaa keessa gadda ta’aanii utuu jiranu humni mootummaa dhukaasa banee ajjeechaa raawwateera.
Achuma godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamee, ajjeefamusa qofa odoo hin taanee akka hin-awwalamne dhorkameera.
Ammas godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti nama sangaatti camadani qotaniiru.
Dargaggoo Kadiroo Biraanuu, Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaphoo keessatti manaa gadi waamamee ija haadha isa deesse/dhalte duratti humna mootummaatiin ajjeefameera.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu keessatti namoota to’annoo seeraa jala jiranu buufata poolisii keessa gadi baasani ajjeesaniiru.
Namootii ykn qaamoleen seeraan hin-bulle tarkaanfii agaggee akkaa fudhatan ni-jiru yoo jedhamellee, qaamni mootummaa garuu ajjeechaa seeraan alaa (extrajudicial) akkanaa ni-fudhata jedhamee hin-eegamu. Taateen akkanaa wayita irra deddeebi’e raawwatamu beekamtii qaama mootummaa ol’aanoo ykn beekamtii hoggantoota mootummaatiin ala akka hin-taane ni-hubatama. Garuu, rakkoo siyaasaa ajjeechaa namoota tokko tokkootiin gonkuma furamu akka hin-danda’amne jala murree beeksifna. Namoota fi addunyaa qarooman birattis tarkaanfiin akkana fudhatama hin-qabu.
Tarkaanfiin akkanaa yoo itti fufe ammoo balaa guddaa hordofsiisus danda’a. KFOn tarkaanfii suukanneessa akkanaa cimsee balaalleefata. Kanaaf, ajjeechaan seeraan alaa lammilee adda addaa irratti raawwatama jiru hattaataman akka dhaabbatu cimsinee hubachiifna. Firoota ajjeefamtootafis beenyaan akka kanfalamu ni-yaadachiifna.
Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO)